अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका नर्स भन्छन्– तनावमा कहिलेसम्म काम गर्ने? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका नर्स भन्छन्– तनावमा कहिलेसम्म काम गर्ने? निर्देशकको नेतृत्व कमजोर : नर्स
बिहिबार, वैशाख २६, २०७६, ०८:००:००
काठमाडौं— बिरामीको सेवामा खटिनुपर्ने नर्स तनावमुक्त हुनुपर्छ। सेवा दिने व्यक्ति तनावमुक्त भए मात्र बिरामीलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ।
तर, लामो समयदेखि भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा कार्यरत नर्स तनावमुक्त हुन सकेका छैनन्।
उनीहरु पटकपटक आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। अस्पताल प्रशासनले तनाव दिने काम गरेको भन्दै उनीहरु कालोपट्टी हुँदै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
आन्दोलनमा उत्रिए पनि बिरामीको सेवा प्रभावित गर्न हुँदैन भन्दै नर्सहरुले ड्युटी मिलाएर सेवा र आन्दोलनका कार्यक्रम सँगसँगै लगेका छन्।
अस्पतालमा केन्द्रित उनीहरुको आन्दोलन यतिबेला नेपाल नर्सिङ संघको प्राङ्गणसम्म आइपुगेको छ।
पुराना कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने, काम र अनुभव हेरेर बढुवा गर्नुपर्ने, आफ्ना मान्छेलाई छानेर राख्नुभन्दा काम गर्दै आएकालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, जोखिम भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने जस्ता माग राख्दै नर्सहरु वैशाख ११ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
नर्सहरुले यिनै माग राखेर पटकपटक आन्दोलन गरेका थिए। तर, सम्झौता हुने कार्यान्वयन नहुने भएपछि उनीहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
नर्सहरुको यो विवाद समाधानका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा वार्ता पनि भएको थियो। तर, नर्सहरुले राखेको मागअनुसार पुराना कर्मचारीको सुरक्षाका विषयमा सहमति हुन सकेन।
मन्त्रालय, नेपाल नर्सिङ संघका प्रतिनिधि र केन्द्रका निर्देशक डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठले यी विषयमा सहमति गरे। तर, आन्दोलनरत नर्सले भने उक्त सहमति मान्य नहुने भन्दै विरोध गरे।
गत शुक्रबार मन्त्रालयमा उनीहरुले निर्देशक डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठलाई घेराउ नै गरे। लगत्तै आन्दोलनरत नर्सलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्यो। राति ११ बजे मात्र उनीहरुलाई छाडियो।
तर, आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखे। आइतबारदेखि नर्सिङ संघको कार्यालयमा आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखे।
नर्सहरुले आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिँदै गत आइतबारदेखि नेपाल नर्सिङ संघमा ताला लगाएर धर्ना दिएका हुन्। संघका पदाधिकारीले प्रहरी बोलाएर ताला फोड्ने काम गरे। त्यसपछि आन्दोलनरत नर्सहरु झन् आक्रोसित बने।
संघमा धर्ना दिइरहेका नर्सलाई बुधबार प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको छ। उनीहरुलाई दरबारमार्गस्थित प्रहरी बृत्तमा ल्याएर राखेको थियो। बुधबार साँझ नै उनीहरुलाई रिहा गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख दीपेन्द्ररमण सिंह भन्छन्, ‘सम्झौता भइसकेपछि पनि पटकपटक विवाद भइरहनु आश्चर्य हो, के कारण रहेछ, त्यहाँको विवाद नै साम्य हुँदैन यसले अप्ठारो स्थिसत बनायो। तैपनि हामी मिलाउने प्रयासमै छौं।’
केन्द्रमा कार्यरत नर्स त्रजिना जतिले निर्देशकको नेतृत्व कमजोर भएका कारण सधैं आन्दोलनको स्थिति आइरहेको आरोप लगाइन्। ‘सधैं तनाव दिइरहने काम मात्र हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बिरामीलाई हाँसीखुसी सेवा दिनुपर्ने नर्सलाई तनाव दिएर निर्देशकले नै समस्या बल्झाइरहेका हुन्। यस्तो तनावमा कहिलेसम्म काम गर्ने?’
उनले निर्देशकले अस्पतालको संस्थागत विकास गर्दै अगाडि नबढ्दा समस्या आइरहेको पनि बताइन्।
नर्सिङ संघले पनि व्यावसायिक रुपमा नर्सका लागि आवाज नउठाएको उनको भनाइ छ।
नर्सिङ संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेल आन्दोलनरत नर्सका जायज मागलाई मात्र आफूहरुले पूरा गर्न पहल गर्ने बताउँछिन्।
‘लोकसेवाले लिएको परीक्षामा सबै जना पास हुनुपर्ने र फेल भइहाल्यो भने पनि करारमा राख्नुपर्ने अडान उनीहरुको छ, यस्ता माग कसरी पूरा हुन्छ?’ उनले भनिन्।
सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले सूचना निकाली आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्न आन्दोलनरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ।
केन्द्रका निर्देशक डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठले जायज माग पूरा गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको बताए। ‘लोक सेवाबाट खुला प्रतिस्पर्धामा पास भएर आउनेले मात्र नभई यहाँ काम गरेका तर लोकसेवामा नाम निकाल्न नसक्नेलाई पनि करारमा राख्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘तर पनि उहाँहरुले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ। मलाई लाग्छ, अस्पतालको सेवा प्रभावित पार्न कुनै गिरोह नै लागिरहेको छ।’
निषेधाज्ञाका समयमा बिरामीलाई टेलिमेडिसिन सेवा दिँदै नेपाल हेल्थ कर्प्स ४१ मिनेट पहिले
होम आइसोलेसन र मानिसक स्वास्थ्य १ घण्टा पहिले
बिपी प्रतिष्ठानमा कोरोना संक्रमित पुरुषको जटिल शल्यक्रिया ५ घण्टा पहिले